ညီလင်းသစ်: ဘိလပ်မြို့တော်သို့ (၃) ...
Posted by ညီလင်းသစ် au 4.2.13
I had alwaysawish to watchamusical like Lion King and Mamma Mia in one of the London theaters but missed the chance as the tickets are quite expensive forastudent. Lucky that you gotachance to enjoy the Shrek musical. :-) The rainforest like restaurant is interesting too. Love every picture of this post and my favourite ones includeadish of mohninga and dry balachaung with Lion trademark. We should be proud, indeed! And of course... the pictures of lovely thar thar. :)
Thanks for sharing and we enjoy along with your trip starts from the beginning till end. ^_^
ပျော်ပျော်ပါးပါး လိုက်လည်သွားတယ် :) စာလုပ်ရင်းနဲ့ စိတ်နောက်လို့ ဝင်လာခဲ့တာ ဝင်ရကျိုးနပ်ခဲ့ပါတယ် ကိုညီလင်းသစ်ရေ၊၊ ပိုစ်တွေ တရပ်စပ် မတင်နိူင်ပေမယ့် ရေးလိုက်တဲ့ပိုစ်တိုင်းဟာ အလေးအနက်ထားခြင်းနဲ့ သေသပ်မှုတွေ ပြည့်လို့နေခဲ့တယ်၊၊ အဲဒီ သင်ခန်းစာအတွက် ကျေးဇူးပါ အကို၊၊
ဒေသန္တရ ၀င်စားမှု ၊ အိမ်ချစ်စိတ် နဲ့ လူမှုကိစ္စ စတာတွေကို သက်ဝင်လှုပ်ခတ်စေခဲ့ပါတယ် ...
အနွေးထည်ထူထူဝတ်ထားတဲ့ကြားက တုပ်ကွေးက မိလိုက်သေးတယ်။ ဆေးတွေသောက်ပြီး ဘိလပ်ခရီး အဆုံးအထိ လိုက်ခဲ့ပါတယ် အစ်ကို :)
အပိုင်း ၁ ၊ ၂၊ ၃ အကုန်လုံး ဖတ်သွားတယ် ..း))
ဘိလပ်မြို့တော်လေးထဲ စီးမျောခဲ့မိရပါတယ် .. မျှဝေမှု အတွက် ကျေးဇူးပါရှင် ..
မိသားစုနှင့်ပျော်ရွှင်ဖွယ် နှစ်သစ်ကူးလေးကို အစဉ် ထာဝရပိုင်ဆိုင်ရပါစေလို့ ..
ကိုညီလင်းစားရေးကောင်းတော့ စာဖတ်ပြီး စာထဲပါသွားလိုက်တာ
အစ်ကို့ပို့စ်တွေ ဖတ်ရတာ.. ပျော်ဖို့ကောင်းတယ်.. တခုခုကို ပေးစွမ်းနိုင်တယ်.. ကြည်နူးမှု၊ ပျော်ရွှင်မှု တစ်ခုခုပေါ့.... အစ်ကို့ကလေးက ချစ်စရာလေး.... အစ်ကို့ပုံသာ ထည့်ဖို့လိုပါတော့တယ်... :D
သားသား စူပုတ်ပုတ်ဖြစ်နေပုံက ချစ်စရာကောင်းလိုက်တာ
ဗျ....။လန်ဒန်ရဲ့ နှစ်သစ်ကူးကို မြန်မာမွင်းဂါးတစ်ပွဲနဲ့
ချောင်ကြော်ကို နှိုင်းယှဉ်ရေးသွားပုံလေးပဲဗျ...၊အသံထွက်ပြီးတောင် ရီလိုက်မိ..... :)))
အကို့ပုံနဲ့ အမတော့်ပုံပဲ ကျန်တော့တယ်...:P
သဘောကျမိတာတွေက အများကြီးရယ်မို့ ဘယ်ဟာကို
ပိုပြီး သဘောကျမိတယ်ဆိုတာ ကိုယ့်ကိုယ်တောင် မသိတော့ဘူးရယ်....ပြဇာတ်တွေ အော်ပရာတွေ
မြူဇစ်ကယ်တွေကတော့ ညလေးလဲ အရမ်းသဘောကျမိတယ်....နောက်ပြီး မိုးသစ်တော
ရေးတတ်ပါပေ့နော်...သပ်ရပ်လှပတဲ့ အဆုံးသတ်လေးအထိကို စာရေးကောင်းတဲ့ အကိုနဲ့
အတူ လိုက်ပါစီးမြောခဲ့ပါကြောင်းးးး :)
ကွန်နက်ရှင် နှေးနေလို့ ပုံတွေပေါ်အောင် အကြာကြီး စောင့်ကြည့်ရတယ် ကိုညီလင်းရေ ... ။
မမေလဲ မြေအောက်ရထား မကြိုက်ဘူး၊ လူရှုပ်တာ မကြိုက်ဘူး၊ ဘိလပ်မှာနေတဲ့ ၄ နှစ်ကျော် အတောအတွင်း လန်ဒန်ကို ၃ ခေါက်လားပဲ ... ရောက်ဖူးတာ။
ကိုညီလင်းတို့ မိသားစု နောက်တခါ ဘိလပ်သွားရင် လန်ဒန်မှာ မနေနဲ့ ... ကိုညီလင်းရဲ့ .. အေးအေးဆေးဆေးရှိတဲ့ နယ်မြို့လေးတွေကို လျှောက်လည်ပေါ့။
ဓာတ်ပုံတွေကြည့်ရင်း မုန့်ဟင်းခါးပန်းကန်ထဲက ငရုတ်သီးခြောက်တောင့် ၂ ခုကို မြင်လိုက်ရတာနဲ့တွင် လျှာတွေစပ်လာတယ်။ :) အက်စ်ပရက်ဆိုလေး ကယ်လိုက်ပေလို့ :P
ခြင်္သေ့ဘာလချောင်ကတော့ ဦးရီးတော် ၀ယ်လာလို့ စားဖူးတယ်။ ကိုညီလင်း ဘာလချောင်ဝယ်တဲ့ စိတ်မျိုး ... ဖတ်ပြီး ပြုံးမိတယ် ... ၀မ်းသာအားရနဲ့ ၃ ပုလင်းတောင် အားပေးလိုက်တာပေါ့လေ။
ဘိလပ်မြို့တော် ခရီးကို မြန်မာ့ဘာလချောင်လေးနဲ့ အဆုံးသတ်လိုက်တာ သဘောကျတယ် ကိုညီလင်းရေ ...
မမေလဲ နောက်တခါ ဘိလပ်ရောက်ရင် ဖြစ်ဖြစ် ... ရန်ကုန်မှာပဲ ဖြစ်ဖြစ် ကိုညီလင်းတို့ မိသားစုလေးနဲ့ ဆုံချင်ပါသေးတယ်။
Yes, either students or not, musicals are expensive for everyone. :) I totally agree with you. Well, I happened to watch Lion King at that time asaticket was offered to me. Otherwise, I don't think I could have afforded one. :) Thanks also for your lovely appreciation and encouragement !!
မတွေ့တာကြာပြီလို့ မှတ်နေတာ စာမေးပွဲတွေ ဆက်နေပုံရတယ်၊း) အခိုက်အတန့်အားဖြင့် စိတ်ကြည်လင်စေတယ် သိရလို့ ဝမ်းသာရပါတယ်ဗျာ၊ စာမေးပွဲတွေလည်း ဖြေနိုင်ပါစေလို့...၊
စိတ်ဝင်တစားနဲ့ လာဖတ်လို့ ကျေးဇူးပါပဲဗျာ...၊
ဟော... ဖြစ်မှဖြစ်ရလေဗျာ၊ မညိုလေးလည်း တုပ်ကွေး မိနေတာကိုး..၊ ခရီးစဉ်မှာ လေစိမ်းတွေက တဝူးဝူးနဲ့ဗျာ..၊း) ဒါကိုပဲ အဆုံးထိ လိုက်လာသေးလို့ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်နော်...၊
လာဖတ်တာ ကျေးဇူးပါ ညီမရေ...၊
လာလည်တဲ့ အတွက်ရော နှစ်လိုဖွယ်ရာ ဆုတောင်းလေး အတွက်ရော ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဗျာ...၊
ကျေးဇူးပါနော်၊ မုန့်ဟင်းခါးကတော့ ပြန်ကြည့်ပြီး ကျနော်လည်း ထပ်စားချင်နေမိတယ်...၊း)
ပို့စ်တွေကနေ တစုံတခု ရတယ်ဆိုတော့လည်း ကျနော် ဝမ်းသာရ ပါတယ်၊ အဲ... ကျနော်က အများအားဖြင့် ကင်မရာရဲ့ အနောက်ဖက်မှာ ရပ်သူဗျ...၊း)
လဲရမယ်လေ..၊ လန်ဒန်နှစ်သစ်ကူးက မြန်မာ့မုန့်ဟင်းခါးနဲ့ ယှဉ်လိုက်ရင် ဦးစားပေး မဟုတ်တော့တာ သေချာတယ်ဗျ၊း) အေးဗျာ..၊ ကျနော်တို့ရဲ့ ဘာလချောင်ကို အားပေးမယ့်သူက ကျနော်တို့ပဲ ရှိတယ် မဟုတ်လား၊ ကေသရာဇာကြီး မာန်ဖီနိုင်ပါ စေကြောင်းပေါ့လေ... နော၊း)
ဟုတ်.. အစ်မ၊ စားလို့လည်း အဆင်ပြေပါတယ်...၊
လန်ဒန်က တကယ်ဆိုရင် ဒီ့ထက်လှတဲ့ နေရာတွေ အများကြီး ရှိတာပေါ့လေ၊ ကျနော်က လွတ်လွတ်လပ်လပ် ဓါတ်ပုံ လိုက်မရိုက် နိုင်လို့ပါ၊ ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် ရိုက်နိုင်သလောက်လေး ရိုက်ခဲ့တဲ့ ပုံတွေကို နှစ်သက်တဲ့အတွက် ကျေးဇူးပါဗျာ၊ သားရဲ့ အမေပုံကိုတော့ ဟိုအရင်က ပို့စ်အချို့မှာ တင်ဖူးပါတယ်၊ အင်း.. ကျနော့်ပုံကျတော့.. ကျနော်က ဒီပုံတွေကို ရိုက်ဖို့ ကင်မရာ နောက်မှာ ရပ်ရသူ မဟုတ်လား...၊ ဆိုတော့... ...၊း)
ကွန်နက်ရှင်အကြောင်း ကြားရတာ စိတ်မကောင်းပါဘူး မမေရေ၊ ကျနော်လည်း ပုံတွေကို လေးမှာစိုးလို့ resolution အနိမ့်ဆုံး ချထားတာပါပဲ၊ မမေ အကြံပေးတာကောင်းတယ်၊ နောက်တစ်ခါဆို မင်းဂံရွာလို နယ်ဖက်တွေကို သွားဖို့ ကြိုးစားရမယ်၊း) ငရုတ်သီးတွေက စားလို့ကောင်းတယ် မမေရဲ့၊ မစပ်ဘူး၊ ဟုတ်တယ်ဗျာ..၊ ဘာလချောင်တွေကို အားပေးလိုက်တယ်၊ နှစ်သိမ့်ဆုပေါ့လေ..၊း) ကျနော်တို့လည်း မမေနဲ့ ဆုံနိုင်ဖို့ မျှော်လင့်မိပါတယ်...။
မမျှော်လင့်ပဲဘိလပ်ခရီးစဉ်မှာမုန့် ဟင်းခါးလည်းစားရ ဘာလချောင်ကြော်လည်းစားရတော့ကျမသာဆုိုအဲလိုပဲလုပ်ဖြစ်မှာလို့ တွေးမိတယ်။ သားလေးအပါအ၀င်ပုံကောင်းတွေလည်းကြည့်ရလို့ ကျေးဇူးပါကိုညီလင်းသစ်ရေ။
သားလေးက ထွားလာတယ်..ဘိလပ်အကြောင်း သိရတဲ့အတွက် ကျေးဇူးပါ ကိုညီလင်း..
ဘိလပ်မြို့တော် နိဂုံးချုပ်လေး ဖတ်သွားပြီ မောင်ညီလင်းရေ။ စနစ်တကျလေးနဲ့ ဟာကွက်မရှိ အကွက်စေ့စေ့လေး ရေးသွားတာကို ချီးကျူးပါတယ်။ တကယ်ဆို ဒီထက်သာပို ကြာကြာနေခွင့်ရရင် တီတင့်တို့လည်း ဒီထက်ပိုသိခွင့်ရမှာပေါ့နော်။ လူကြီးတွေတောင် မလွှဲသာလို့ သွားရတဲ့ လူအုပ်ကြီးကြားမှာ သားတော်မောင် နှုတ်ခမ်းစူသင့်ပါတယ်လေ။
မသိလိုက်တာနဲ့ အပိုင်း (၃) ကိုခုမှဖတ်ခွင့်ရတယ် အကိုရာ..။
ပုံကလေးတွေနဲ့ အစီအစဉ်တကျ၊ သေသေသပ်သပ်ရေးသွားတာလေး သဘောကျလိုက်တာ..။
ညီမ အကြိုက်ဆုံးက Rainforest cafe ပဲ။
ပုံလေးထဲ့ တစွန်းတစလှမ်းမြင်ရ။ အကို ရေးပြတာဖတ်ရတာနဲ့တင် တော်တော်စိတ်ဝင်စားနေတယ်။ ဟိုးးနောက်က ဆင်ရုပ်ကြီးတွေလား...အစစ်တွေတော့ ဟုတ်လောက်ပါဘူးနော်...။
သားကလေးပုံတွေကို ချစ်ခင်စိတ်နဲ့ သဘောတကျကြည့်မိတယ်..။
လန်ဒန်မှာလည်း ဘာလချောင်ကြော်၇ှိတာပဲနော်.. :D ။
မုန့်ဟင်းခါးကတော့ သိပ်မကြိုက်လှဘူး အကိုရဲ့..။
အကို့ ခရီးစဉ်လေးကို အဆုံးထိလိုက်ခဲ့ရင်း လန်ဒန်ကို တကယ်ပဲရောက်သွားသလို ကျေနပ်ပျော်ရွှင်ခဲ့ရတယ်..။
အကို ကျန်းမာပျော်ရွှင်ပြီး စာတွေ အများကြီးရေးနိုင်ပါစေရှင်.....။
Happy ending with "Balachaung" ;-)
အလုပ်များနေတာနဲ့ အစ်ကို့လန်ဒန်ပို့စ်နောက်ဆုံးပိုင်းကို ခုမှပဲလာဖတ်ဖြစ်တော့တယ်..။ ကလေးခင်ဗျာသနားပါတယ် လူတွေအများကြီးကြားမှာ တော်တော်စိတ်ရှုပ် စိတ်ညစ်နေရှာမှာ...။ အစ်ကိုရေးတဲ့ ခရီးသွားပို့စ်တွေအရမ်းသဘောကျမိတယ်ဆိုတာ ကိုယ်တိုင်လိုက်ပါးသွားရသလို ခံစားမှုမျိုးကိုပေးနိုင်စွမ်းတဲ့အရေးအသားကြောင့်ပဲ..။ နောက်တစ်ပို့စ်ကတော့ စလုံးခရီးစဉ်ထင်ပါရဲ့...စောင့်မျှော်နေပါ့မယ်..။ မိသားစုအားလုံးပျော်ရွှင်ကျန်းမာပါစေ..။
ဒေသန္တရ ဗဟုသုတ အပြည့်ပေးထားတာကို
အထူးသဖြင့် ဓာတ်ပုံ တည်နေရာတွေနဲ့တစ်ကွ
အုတ်နီခဲအကွက်လေး တွေနဲ့ တိတ်တိတ်ဆိတ်ဆိတ် အိမ်လေးတွေ ရှိတတ်တဲ့ နေရာပေါ့...၊ အမြဲလိုလို မိုးရွာရင်ရွာ၊ မရွာရင် အုံ့မှိုင်းနေတတ်တဲ့ မြို့လေး..